वकिलको मोवाइलमा समिक्षाले पठाइन् डर लाग्दो म्यासेज, बुवाआमा निरास — Imandarmedia.com
वकिलको मोवाइलमा समिक्षाले पठाइन् डर लाग्दो म्यासेज, बुवाआमा निरास
काठमाडौ। समिक्षा अधिकारीले आफूमाथि बलात्कार भएको सार्वजनिक भएपछि उनको बुवाले प्रहरीमा जबरजस्ती करणीको मुद्धा दायर गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा अभिनेता पल शाहविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका हुन्।
मुद्धा दर्ता भएपछि पल शाह आफै प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण गर्दै तनहुँ पुगे। बुधबार अभिनेत्री पूजा शर्मा तामझामसहित नाबालिका बलात्कारका आरोपित पल शाहलाई भेट्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ जाँदा उनलाई हेर्ने र समर्थनमा नाराबाजी गर्नेको भीड थामिनसक्नु थियो।
भीडभन्दा अलि पर पीडित किशोरीका बुवा चुपचाप बसेका थिए, छेउमा आमाको मौनता उस्तै थियो। यता आरोपितकै पक्षमा त्यो नाराबाजी उता गाउँमा गाउँलेको छिःछिः र दुरदुर !
यस्ती छोरी जन्माउनुभन्दा बरु बाँझै बस्नु बेस !’ पीडित बालिकाकी आमा छरछिमेकीको परिवर्तित व्यवहारबारे अधिवक्ता राधिका खतिवडालाई सुनाउँदा भक्कानिन्छिन्। बल्ल–बल्ल साहस जुटाएर न्यायको लडाइँमा सरिक उनको बुवा आरोपितकै रजगज देखेर अवाक् छन्।
अलि अघिसम्म प्रतिभावान छोरीले गाउँको इज्जत राखिन् भन्नेहरूले फेरेको बोली र व्यवहारले दुखाएको जरूर छ तर हराइसकेको छैन। हार्न नमिल्ने लडाइँमा लागेकाले हुनुपर्छ, यी दम्पतीको भरोसा राज्यसँग छ।
यो बेलासम्म राज्य उनीहरूकै साथमा छ। मिठो गाएर छोटो समयमा सफलताको उचाइ नापेकी १७ वर्षीया गायिकाको मनमा चलेको हुटहुटी र बेचैनीको पनि कुरा गरेर साध्य छैन।
स्वाभाविक हो, मनमा हजारथरी कुरा खेल्छन्, रातभरि निद्रा पर्दैन, सामाजिक सञ्जाल खोल्दा बर्सिरहेका अश्लील गालीको असिनाले थिचिएर उठ्नै सक्दिन जस्तो लाग्छ उनलाई।
छेउमै सुतिरहेकी साथीलाई कोट्याएर भन्छिन्, अब म बाँच्न सक्दिन। उनको न्यायका निमित्त वकालतमा होमिएकी अधिवक्ता खतिवडाको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ,अब मर्छु होला दिदी!
फेरि ओल्टोकोल्टो फेर्छिन् र भन्छिन्, न्यायको यो लडाइँमा नजिती भएको छैन। उनको यही अठोटमा साथ दिनेहरू आँट भरिदिन्छन्,निराश नहुन हौस्याउँछन् र उज्वल भविष्यको मार्गचित्र देखाइदिन्छन्।
यसै पनि उनी न्याय प्राप्तिको यो मैदानमा सानो साहसले होमिएकी हैनन्। नत्र १४ वैशाख २०७८ मा अन्तिमपटक जबरजस्ती करणीको सिकार बनेकी यी किशोरीलाई बाहिर आउन र आवाज उठाउन आफैंसँग यति धेरै संघर्ष गर्नै पर्दैनथ्यो।
पल शाहविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? जबर्जस्ती करणी ब’ला’त्का’र’को आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेको केही दिनपछि अभिनेता पूर्णविक्रम शाह पल शाहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा आत्मसमर्पण गरे।
जिल्ला अदालतले आइतबार नै उनलाई एक साता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो। सम्भवतः उनी केही दिन प्रहरी हिरासतमा रहनेछन् र त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७३ मा कुनै फौजदारी कसुरको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेमा के गर्ने भन्नेबारे विस्तृत प्रक्रियाहरू खुलाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले केही दिनअघि नै शाहविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिसकेको छ। अब भने प्रहरीले प्रमाण संकलनको प्रक्रिया सुरु गर्छ। आरोपित पल शाह र उनका समर्थकले पीडित किशोरीको सहमतिमा उनीहरूसँगै बस्ने गरेको भनी दाबी गरेका छन्।
तर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २१९ मा १८ वर्षमुनिको नाबालकको हकमा मञ्जुरी लिएरसमेत करणी गर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त दफमा भनिएको छ, मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।
यो आरोप पुष्टि भएमा पीडितको उमेरले गणना गर्दा शाहमाथि १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। प्रहरीले सुरुमा पीडित किशोरी र उनका संरक्षक बाबुको बयान लिन्छ। फौजदारी कानुनमा पीडितको जाहेरी र अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गर्ने भनाइलाई महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ।
त्यसपछि पीडितका संरक्षकसँग प्रहरीले सोध्छ। प्रमाणका लागि पीडित किशोरीले स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकेकी छन्। त्यसपछि प्रहरीले अभिनेता पल शाहको बयान लिन्छ। बयानका क्रममा शाहले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने मौका पाउनेछन्।
उनले आरोप झुटा रहेको भनी आफ्नो दलिल पेस गर्ने मौकासमेत पाउनेछन्। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा घटना देख्ने वा त्यससँग सरोकार राख्ने मानिसहरूसँग समेत बुझ्न र बयान लिन सक्नेछ। शाहले एउटा कुराकानीका क्रममा आफूहरूबीच सम्बन्ध भए पनि पीडित किशोरी गर्भवती नभएको’ भनी बोलेको अडियो सार्वजनिक भएको छ।
प्रहरीले त्यो अडियो रेकर्डसमेत प्रमाणको रुपमा पेस गर्नसक्छ। अनुसन्धान टुंगिएपछि मुद्दा चल्ने प्रमाण भेटिएमा प्रहरीले शाहविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिन्छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत तनहुँमा पल शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेछ। पीडितका बाबुले जाहेरी दिएको अनि पीडित किशोरीले नै आफूमाथि बलात्कार भएको स्वीकारेकाले शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने करिब-करिब निश्चितजस्तै छ।
मुद्दा दायर हुनासाथ जिल्ला अदालतमा शाहको बयान हुनेछ। बयान सकिएपछि शाहलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्ने भन्नेमा बहस हुनेछ। अदालती भाषामा थुनछेक बहस भनिने यो प्रक्रिया सकिएपछि जिल्ला अदालतले शाहलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्ने आदेश दिनेछ।
सामान्यतयाः ३ वर्षभन्दा बढी सजाय तोकिएको अनि प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा कुनै न कुनै प्रमाण भेटिएमा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने चलन हुन्छ। अभिनेता शाहविरुद्ध पीडित किशोरीले नवलपरासीमा समेत किटानी जाहेरी दिएकी छन्।
जुन जिल्लामा अपराध भएको हो, त्यही जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले नवलपरासीमा समेत आफूमाथि जबर्जस्ती भएको भन्दै किशोरीले जाहेरी दिएकी हुन्। उनले गत ७ चैत २०७७ मा आफूमाथि गैडाकोट रिसोर्टमा जबर्जस्ती भएको आरोप लगाएकी छन्।
अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा हिरासतमा रहेका पल शाहले अदालतको सामना गरेपछि उनलाई फेरि प्रहरीले नवलपरासीमा ल्याउनेछ। त्यहाँ पनि तनहुँकै झै प्रक्रिया अघि बढ्छ र प्रहरीले प्रमाण देखेमा सरकारी वकिल कार्यालयले शाहविरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा बलात्कारको दोस्रो मुद्दा चलाउनेछ।
बलात्कारको मुद्दामा पीडित किशोरीमात्रै होइन, उनको पहिचान खुल्ने अरु विवरणसमेत गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्नेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा परेको जाहेरीकै कारणले पल शाहले नवलपरासीमा परेको जाहेरीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्।